‘Azidingeki izikibha nezingqwembe ezineziqubulo engqungqutheleni ye-ANC’ | News24
‘Azidingeki izikibha nezingqwembe ezineziqubulo engqungqutheleni ye-ANC’
Johannesburg – USekela Nobhala Jikelele we-ANC, uJessie Duarte, usexwayise izithunywa ezizohambela ingqungquthela yaleli qembu yenqubomgomo ngokuthi angeke baze bakubekezelele nakancane ukukhankaselwa kwabaholi ezobathandayo.
Le ngqungquthela izoba seNasrec, njengoba ziqhubeka izingxoxo ngozongena esikhundleni sobuMengameli nosekuhlukanise phakathi iqembu kwabakhankasela uSekela Mengameli uCyril Ramaphosa kanye nowayenguSihlalo we-African Union, uNkosazana Dlamini-Zuma.
Zombili lezi zinhlangothi kulindeleke ukuthi zisebenzise le ngqungquthela ukuthola ukwesekwa ngaphambi kwengqungquthela kazwelonke yokukhetha ubuholi ngoDisemba.
UDuarte utshele iNews24 ukuthi izingoma kanye neziqubulo ezeseka abaholi abathile angeke zivunyelwe.
OLUNYE UDABA: UMbalula akangazami ukuphatha i-ANCYL esesethuneni – Maine
“Akusiyo ingqungquthela lapho nizocula amaculo ngabanye, angeke size sizamukele izikibha ezineziqubulo kanye nezingqwembe ezineziqubulo. Lena kuzoba yindawo yenkulumompikiswano, uzovunyelwa ukukhuluma bese uba nomthelela kwabanye abantu,” usho kanje.
“Awukwazi ukukhetha ubuholi ngaphandle uma wazi ukuthi yini abazoyihola,” kuqhuba uDuarte.
Uthi leli qembu liyithathela phezulu le ngqungquthela njengoba lifuna ukuqeda ukwehla kokwesekwa kweqembu.
“Asikwazi ukuvumela leli zwe ukuthi liwele emuva ezandleni zalabo ababeliphethe ngahambilini,” usho kanje.
Uguquko olusheshayo kwezomnotho, izinga eliphezulu lokungasebenzi kanye nodaba lomhlaba, kulindeleke kube ngezinye zezihloko ezizoqubula inkulumompikiswano eshisayo kule ngqungquthela.